First ... 33 41 42 43 44 Last
02-15-2017 02:21 AM #421
စလုံးမှာ မျက်စိပြဘူးတဲ့ သူ (သို့) အသိပြဘူးတာများရှိလား မသိဘူး ... မျက်စိခွဲတာတို့ လေဆာပစ် တာတို့ဘာတို့ပေါ့
အဖေက ဘယ်ဘက် မျက်စိ ရေတိမ်ရှိပြီး တိမ်လည်းရှိလို့ ခွဲဘို့ လိုလာလို့ ...
ရန်ကုန် နဲ့ စလုံးနဲ့ ကုန်ကျစရိတ် အကြမ်းမျဉ်းလောက် ချိန်ကြည့် ချင်လို့ပါ။
2323, flintz, Jin_kaleat, meJit
02-16-2017 06:30 AM #422
Thanked 321 Times in 39 Posts
2323, blooddiamond6, GreenHat, Jin_kaleat, meJit
02-20-2017 08:54 AM #423
အပေါ်က ကို သံမျက်နှာဖုံး ရေ ကျေးဇူးပါဗျာ... မြန်မာ ဆရာဝန် လင့် ပေးလို့...
ကုန်ကျစရိတ် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စုံးစမ်း ရသလောက် ... တိမ်ခွဲတာ က တစ်ဘက်ကို ၄၀၀၀-၆၀၀၀ ကြားလောက် ဆေးခန်း ဆရာဝန်ပေါ်မူတည်ပြီးကုန် နိုင်တယ်....
ရေတိမ် ကတော့ အကြမ်းဖျင်းပြောလို့မရဘူးတဲ့...
2323, GreenHat, ironmask80, Jin_kaleat, meJit
08-01-2017 01:17 AM #424
ဆာဒေါက်တာတွေရှိလားမတိဘူး .. မေးခြင်ရို့ပါ
စလုံးမှာ ဒါတွေ ဘယ် မှာလုပ်လို့ရပြီး ဘယ်လောက်လောက်ကုန်နိုင်လည်း သိပါရစေ။
ခလေးယူမလို့ မရနိုင်တာနဲ့ စဉ်းစားမိလို့ပါဗျာ, IVF ကတော့ ဈေးကြီးမယ်ထင်တာနဲ့ မမှီနိုင်လောက်လို့
ရန်ကုန်ပြန်ပြီးလုပ်ရင်ရော ဘယ်မှာ ဘယ်ဈေးလောက်ရှိမလဲ။
သိသလောက်တော့ ဘဟိုစီ မှာ တွေ့တယ် online မှာ ဟိုရှာဒီရှာ ပေါ့...
daylight, flintz, GreenHat, Jin_kaleat, kohtwe, mgmgthan, oasis, THIHA, tiptop, weithet
10-02-2017 05:36 AM #425
far away from mother's house
Thanked 8,744 Times in 624 Posts
အမေကို Medical Checkup လုပ်ပေးချင်လို့ပါ၊ Raffles Hospital ရယ် ၊ Parkway Shenton ရယ်တော့ တွေ့ပါတယ်၊ ကျူးပစ်တွေသွားဖူးတဲ့လူတွေ အတွေ့အကြုံလေးတွေရှိရင် ရှဲပါအုံး၊ အမေက အသက်၇၀ရှိပါပြီ၊ ထွေထွေထူးထူးတော့ ဘာရောဂါမှရှိပါဘူး၊ သွေးတိုးရယ်၊နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ( ဆေးသောက်)
ဒါလောက်ပဲရှိပါတယ်၊ Package အနေနဲ့တော့ Raffles က Deluxe Plus ရယ်၊ Parkway က Essential or Plus package ရယ်ကိုသဘောကျမိပါတယ်၊
အမကေို Medical Checkup လုပျပေးခငျြလို့ပါ၊ Raffles Hospital ရယျ ၊ Parkway Shenton ရယျတော့ တှပေ့ါတယျ၊ ကြူးပဈတှသှေားဖူးတဲ့လူတှေ အတှအေ့ကွုံလေးတှရှေိရငျ ရှဲပါအုံး၊ အမကေ အသကျ၇၀ရှိပါပွီ၊ ထှထှေထေူးထူးတော့ ဘာရောဂါမှရှိပါဘူး၊ သှေးတိုးရယျ၊နှလုံးသှေးကွောကဉျြး ( ဆေးသောကျ)
ဒါလောကျပဲရှိပါတယျ၊ Package အနနေဲ့တော့ Raffles က Deluxe Plus ရယျ၊ Parkway က Essential or Plus package ရယျကိုသဘောကမြိပါတယျ၊
GreenHat, Jin_kaleat, kohtwe, meJit, parkye, THIHA, weithet
10-04-2017 02:13 AM #426
parkway တော့မသွားဖူးဘူး၊ Raffles က bugics က ဟာဆိုရင်တော့ သွားဖူးတယ်၊ အဲ့ဒီမှာ မြန်မာစကားပြန်ဆရာဝန်တွေရှိတယ် ၊ Medical Checkup တော့ မလုပ်ဖူးဘူး၊ အဆင်ပြေပါတယ်။
GreenHat, Jin_kaleat, kohtwe, meJit, Min Nanda, THIHA, ThunderHawk, weithet
10-06-2017 02:40 PM #427
အချိန်ပိုင်း မြန်မာ အိမ်အကူ (သန့်ရှင်းရေး ။မီးပူတိုက်တာမျိုး) contact ရှိရင် ပေးပါဦးဗျို့ ...
GreenHat, kohtwe, meJit, THIHA, weithet
06-20-2018 06:39 AM #428
ကူးပစ် တို့လည်း ငြိမ်ချက်ဗျာ
Passport သက်တမ်းတိုးမလို့ ဘာတွေလိုလဲ ပြောပါအုန်း
Depenndent Pass ရဲ့ passport တိုးမှာ Main Pass Tax ဆိုတာ IRAS ပြောတာလား ဟိုးအရင် အခွန်ဆောင်ထားတာလား ( မရှိတော့ဘူး )
Last edited by meJit; 06-21-2018 at 09:14 AM.
flintz, Jin_kaleat, john009, kohtwe, weithet, yokesoe
07-05-2018 03:14 AM #429
Q နံပတ်ယူ ၉ နာရီလောက်ရောက်
ဟိုးအစွန် ကောင်တာ ၁ ကိုသွား စာရွက်စစ် Photo ရိုက် ခနစောင့် ပြန်ခေါ်
စာရွက်ပြ ညနေ Q ပြန်ပေး 10 နာရီ လောက်ပီးရော
Q မယူထားပဲ တန်းလာတာလဲရတာ တွေ့တယ်
ညနေ ၃နာရီ ပြန်ယူ ပိုက်ပိုက် ၃၅ကျပ်သွင်း
ထူးတာဆိုလို့ PV ကနေ PT ပြောင်းခိုင်းတယ် , extra 20$ ..
လူတွေလည်း ဖွဘုတ် ပဲနေဂျတာ ..
ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ Cupid ဝင်ဝင်တော့ခုထိ ကြည့်မိနေတုန်း
Last edited by meJit; 07-05-2018 at 03:17 AM.
Jin_kaleat, kohtwe, nkhant, oasis, Ravan, Yamarmoto, yokesoe, ZAM
07-11-2018 06:16 AM #430
ညနေ မိုင်းဖုန်းဆရာတော် တရားပွဲရှိတယ်နော်လို့
IMG_4775.jpg (59.7 KB,6views)
IMG_4776.jpg (51.8 KB,7views)
Jin_kaleat, kohtwe, nkhant, PiNyat, tiptop, weithet, yokesoe